The Gardener: ကဗျာ ဖတ်စာ (၂)
ကဗျာ ဖတ်စာ (၂)
...apalace must have passages :apoem must have transitions.
သိပ်လှတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုပါပဲ.... နန်းတော်မှာ လမ်းသွယ်လေးတွေရှိတယ် ... အမိုးခုံးလေးတွေနဲ့ နန်းရင်ပြင်အထိသွားလို့ရတဲ့ လမ်းသွယ်လေးတွေမျိုးပေါ့ .... ကဗျာမှာလည်း ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်တဲ့ .... ပုံသေဖြစ်မနေနိုင်ဘူး ... စိတ်က တသမတ်တည်းရှိမနေနိုင်သလို ကဗျာကလည်း တသမတ်တည်းရှိမနေဘူး .... ပြောင်းလဲနေရမယ် .. .အသက်ဝင်နေရမယ် .. တရွေ့ရွေ့သွားနေရမယ် ....။
ကဗျာရေးသူနဲ့ ကဗျာရဲ့ အချေအတင်ဖြစ်မှု၊ မတူညီမှုကြောင့် ထူးခြားအံသြဖွယ် အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ် ...။
ကဗျာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရသစာပေရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်.... ဖန်တီးသူက သူလုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကဗျာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာမျိုးကို ကဗျာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အတတ်ပညာ ပိုင်းကို အသားပေးတဲ့ ကဗျာလို့ပဲ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ကဗျာဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ကဗျာဆရာ တစ်ရာက အခု နှစ်ရာလောက်ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ် ...။ သူ့ဘာသာသူအသီးသီးမှန်ကန်နေတဲ့အဖြေတွေနောက်ကို မလိုက်တော့ဘဲ .. ကဗျာနဲ့ ကဗျာရဲ့ အတွင်းသားကိုပဲပြောတဲ့အခါ၊ ကဗျာက ကဗျာဆရာကို လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ .... အဲဒါကို ခွဲပြီးပြောရတာက ကဗျာဟာ ကဗျာဆရာရဲ့ အာဘော် မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို သိသာစေချင်တာပါ။ ကဗျာရေးနေတုန်းမှာပဲ ကဗျာဆရာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကဗျာရေးတဲ့အချိန်မှာ သူ့စိတ်အတွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ကူး၊ ဒဿန၊ ခံစားချက်နဲ့၊ အတွေးကို ကဗျာဆရာက စာသားတွေကို အသုံးပြုပြီး စပ်ဆိုပါတယ်၊ ရေးသားပါတယ်။ ကဗျာဆိုတဲ့ Object ကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကဗျာဆရာက Subject ဖြစ်နေပြီး ကဗျာက Object ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကဗျာက တဖြည်းဖြည်း အသက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာ ကဗျာဆရာရဲ့ သြဇာကနေ ရုန်းထွက်ပါတယ် ...။ ကဗျာဆရာနဲ့ ကဗျာနဲ့ အားပြိုင်ပါတယ် ...။ တစ်ချို့ကဗျာဆရာတွေက ကဗျာကို အနိုင်ယူလိုက်ပြီး ...တစ်ချို့ကဗျာဆရာတွေက ကဗျာကို အရှုံးပေးလိုက်တယ်။ တစ်ချို့ ကဗျာဆရာတွေက ကဗျာနဲ့အတူ ရွက်လွှင့်သွားပြီး ... တစ်ချို့ကဗျာဆရာတွေက ကဗျာနဲ့အတူပျံသန်းတယ် ...။ .... ကဗျာဟာ ကဗျာဆရာအတွက်တော့ သက်ရှိတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို .... သိပ်လှတဲ့ သစ်ပင်၊ ပျော့ပြောင်းတဲ့ တိမ်တိုက်နဲ့ သိမ်မွေ့တဲ့အ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့ စောင်းညင်းသံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာ ပဋိပက္ခ ဆိုတာ တကယ်တော့ လူတွေရဲ့ စိတ်ရဲ့ ပဋိပက္ခလိုမျိုးပါပဲ ...။ အခြေအနေကို မကျေနပ်တဲ့အခါ လူဟာ တစ်ခါတစ်လေမှာ တစ်ခုခုကို နာကျည်းနေတတ်တယ် ...။ လူ့သဘာဝက လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တယ်။ ချုပ်နှောင်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆကို မွန်းကြပ်တယ်။ လူဟာ အဆင့်ဆင့် အသိဉာင်္ဏ မြင့်လာတယ် ...။ လူဟာ လွတ်လပ်မှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို သွေးထဲက ဆာလောင်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်လာတယ် ....။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်ရင်တောင် မွန်းကြပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လူနေမှုဘ၀ကိုမကျေနပ်ဘူး။ သိသိသာသာ မကျေနပ်သလို၊ တခါတလေ မသိမသာ မကျေနပ်ဘူး ....။ အဲဒီတော့ စိတ်ထဲမှာကိုက ပဋိပက္ခရှိတယ်။ ကဗျာရေးတဲ့အခါလည်း စိတ်ထဲက ပဋိပက္ခတွေပါလာတယ်။ တစ်ချို့ အတွေးတွေက ကဗျာဘက်ကနေ ကိုယ့်ကို ပြန်တိုက်ခိုက်တယ် ...။ ကဗျာမှာ အားပြိုင်မှုပါလာာတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာကို ကိုယ်ငြင်းဆန်မိတယ်။ကိုယ့်ကဗျာကို ကိုယ်မုန်းတီးလာတယ် ...။ကိုယ့်ကဗျာနဲ့ကိုယ် ရန်ဖြစ်နေသလိုဖြစ်လာတယ် ...။ ကဗျာကလည်း လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုလာတယ် ...။ ကဗျာက ကဗျာဆရာရဲ့ အနှောင်အဖွဲ့ကို ဖြည်တယ်။ ကဗျာဆရာကလည်း ကြောင်းကျိုးပြတယ်။ ကဗျာကလည်း ခေါင်းမာမာနဲ့ချေပတယ် ....။ ကဗျာဟာ Obj နေရာမှာ ဆက်မနေနိုင်တော့ဘူး ဆိုပြီး ကဗျာဆရာရဲ့ လက်ကို သူ့လက်နဲ့အစားထိုးတယ် ..။ ကဗျာဆရာရဲ့ နှလုံးသားကို ပိုပြီးနွေးထွေးတဲ့ သူ့နှလုံးသားနဲ့လဲလှယ်တယ် ...။ ကဗျာဆရာရဲ့ အကြည့်ကို ပိုပြီးစူးရှတဲ့ သူ့အကြည့်နဲ့ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်တယ် ။ .... ကဗျာဆရာဟာ ကဗျာကို နေရာပေးရတယ် ...။ ကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အတူဖန်တီးမိကြတယ် ...။ ကဗျာထဲက ဒဿနကို အတူဝေဖန်ခဲ့ကြတယ် ...။ ကဗျာထဲက ဒေါသကို အတူဖောက်ခွဲခဲ့ကြတယ် ...။ ကဗျာထဲက စပျစ်ရည်ကို အတူသောက်သုံးခဲ့ကြတယ် ...။ ကဗျာထဲက အနမ်းကို အတူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြတယ် ...။ အယူအဆမတူတဲ့အခါမှာ ကဗျာနဲ့ ကဗျာဆရာ လုံးထွေးသတ်ပုတ်ခဲ့ကြတယ် ...။ ကဗျာ ဆိုတာ ထုတ်ကုန်တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီဖို့ အခါခပ်သိမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကဗျာဆရာရဲ့ လက်ရာဟာ ပြောင်းလဲနေတယ် ...။ သူ့စိတ်နဲ့အတူ သူ့အာရုံဝင်စားရာနဲ့အတူပြောင်းလဲနေတယ် ...။
ကဗျာကို သေချာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကဗျာရဲ့ တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်မှု Spontaneous ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆက်တိုက် စီးမျောလာသလို သူ့ flow နဲ့သူ စီးဆင်းလာပါတယ်။ (ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အတူရေးဖို့ခက်တာက အဲဒီ Spontaneous ဖြစ်တာကို ထိခိုက်နိုင်တာနဲ့ ကဗျာရဲ့ rhythm ကိုကြားပုံမတူတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အတူရေးမယ်ဆိုရင်ကဗျာရေးသူနှစ်ယောက် (သို့ မဟုတ် နှစ်ယောက်ထက်ပိုသူများ) ဟာ အနည်းဆုံး ကဗျာရဲ့ timing နဲ့ rhythm ကို သိဖို့လိုပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ တစ်ယောက် တစ်လှည့်ရွတ်ပြဖို့လိုပါတယ်။ အသံရဲ့ အသွားအလာကိုသိပြီဆိုရင် စကားလုံးတွေ လိုက်ဖက်ဖို့စဉ်းစားရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် match ဖြစ်အောင် သုံးရပါမယ်။ အတူတူမဖြစ်သွားအောင်လည်းသတိထားရပါမယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အတူရေးကြဖို့ဆိုတာ စိတ်အခြေအနေတူနေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကဗျာကို ဗဟိုပြုထားတဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ဆိုလိုပါတယ် ....။ အဲဒါတွေကြောင့် ကဗျာအတူတူရေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူဘူးလို့ ယျေဘုယျမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။) ကဗျာရဲ့ တန်ပြန်လွှမ်းမှိုးမှုဟာ ကဗျာမှာပါလာတဲ့ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ခွန်အားဟာ ကဗျာကို ပိုပြီးအသက်ဝင်စေပါတယ်။ ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းလွန်းတဲ့ကဗျာတွေက စိတ်ထဲကို ပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကဗျာတွေရဲ့မွန်းကြပ်မှုဟာ တယောသံတွေရဲ့ နှလုံးသားကို တိုက်ရိုက်ထိခတ်စေတဲ့ တေးသွားတွေထက် မလျော့ပါဘူး။ ကဗျာရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ဂီတရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုသြဇာထက်မလျော့ပါဘူး ...။ ကဗျာရဲ့ ဆန့်ထွက်မှုဟာ ကန့်သတ်ချက်မဲ့တဲ့ဆန့်ထွက်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကဗျာရဲ့ တင်းအားကို ကဗျာထဲမှာ အစီအစဉ်တကျ ဖြည့်စွက်တာဟာ ကဗျာရဲ့ ဒိုင်မင်းရှင်းကို ဖြစ်စေဖို့အတွက်ပါ။ ကဗျာဟာဆန့်ထွက်တယ် ...။ အပြင်ကို ဆန့်ထွက်သလို အတွင်းကိုလည်း တိုးဝင်တယ် ...။ အဲဒီလိုရုန်းကန်မှုဟာ ကဗျာ ဘာသာဗေဒကို ဖြစ်ထွန်းစေတာပါ။ ကဗျာဘာသာဗေဒ အတွက် ဘာသာစကား တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ ဘာသာစကားကို ကဗျာရဲ တည်ဆောက်ပုံအပေါ်မှာဖြည့်စွက်ထားတဲ့ တင်းအား(tension) တွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှ ကဗျာဘာသာဗေဒဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ စိတ်ရဲ့မြန်နှုန်းအတက်အကျတွေ၊ ဖွင့်ဆိုမှုတွေ၊ အရိပ်အမြွက်တွေ၊ အသံမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် သွတ်သွင်းခြင်းတွေကိုလည်း ပေါင်းစပ် အားဖြည့်ကြပါသေးတယ်။
ကဗျာတစ်ပုဒ်ဟာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းပါဝင်ရမယ်။ ကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ ဟန် ကဒုတိယဦးစားပေးကိစ္စတွေပဲဖြစ်တယ်။ ကဗျာမှာအမြင်တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုရင် ဖတ်ရတာမတန်သလိုခံစားရတယ်။ ကဗျာက အသက်ဝင်နေရမယ်။ ကဗျာက စကားပြောရမယ်။ကဗျာကတုံဏှိဘာဝေနေနေရင် ဘာမှနားမလည်ဘူး။ အစပ်အဆက်ရှိရမယ်။....ဒီလိုပြောရင် မော်ဒန်သီအိုရီက အဆက်အစပ်မဲ့ခြင်းတို့ အပိုင်းပိုင်းစိတ်ဖြာခြင်း တို့နဲ့ရောထွေးပြီး လာငြင်းနှေမှာစိုးပါတယ်။ မော်ဒန်မှာ Chaos အသွင်ရေးတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မှာလည်း သူ့ 0rder နဲ့သူရှိပါတယ်။ စကားလုံးတွေအစား Symbol တွေအများကြီးသုံးပြီး ညွှန်းချင်ညွှန်းပါမယ်။ အစီအစဉ်တကျလုပ်ထားတဲ့ ပုံစံပါ။ စနစ်တကျ အဆက်အစပ်မဲ့ထားတာလို့ပြောရင်နည်းနည်း နားထွေးစရာကောင်းနေမယ်ထင်ပါတယ်။ ပန်းချီဆရာတစ်ယောက် ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်သွားတဲ့အခါ သူ ဆွဲတဲ့ လိုင်းလေးတစ်ခုစီကို အချိန်မရွေး ပြန်ဆက်စပ် လိုက်လို့ရလောာက်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူလျှောက်ခြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့သေချာသိရသလိုပါပဲ။ ပုံကြမ်းလေးဆွဲထားတာ ပုံချောမဆွဲတတ်လို့မဟုတ်ဘဲ သူက ဒီလိုပဲ presentation လုပ်ချင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် လို့သိရသလိုမျိုးပါ။ ကဗျာဆရာတွေသုံးတဲ့ ဘုရားသခင် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေး ရေရွတ်တဲ့ ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဆောင်တဲ့ တူညီတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဆရာသစ္စာနီ သုံးထားတဲ့ form ကို သုံးတိုင်း သစ္စာနီ ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ကဗျာဆရာတိုင်းမှာ ပင်ကိုယ် အရည်အချင်းအများကြီးရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကဗျာ ကျစ်လျစ်နေတာဟာ အတတ်ပညာ တစ်ခုတည်းကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းနဲ့ အာရုံခံစားမှု ပါးလျထက်မြက်နေတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ K.ဇော် နဲ့ နေမျိုးကဗျာတွေ သိပ်လှနေတာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ရင်းက ရိုးသားတဲ့ကဗျာလှလှလေးတွေအတွက် ရေခံမြေခံကောင်းလို့ပါ။ ဆရာသုခမိန်လှိုင်လည်း အတိုလေးတွေရေးတာကောင်းတယ် ဆိုပြီးလိုက်ရေးရင် ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ စကားလုံးကို အစွမ်းကုန်လျော့ချထားပြီး အထိရောက်ဆုံး ရောက်အောင် သွားနေတဲ့ကဗျာတွေကို အလကားကဗျာလို့ အော်နေရုံနဲ့တော့ ကိုယ့်ဓာတ်ခံအားနည်းတာ လူသိတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ (The poems I love မှာ သုခမိန်လှိုင် ကဗျာတင်တိုင်း လာလာအမနာပလေ့ရှိတဲ့ ကော်မန့်မန့်သူသို့ တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပါတယ်။)
Imagination ကို ပြင်သစ်စကားလုံး Clair-obscur ဆိုတာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းချင်ပါတယ်။ Clair-obscur ကို အတွေးရဲ့ အံ့ဘနန်း အခြမ်းလို့ ဆိုလိုချင်ပုံရပါတယ်။ တစ်ချို့စာသားတွေကို ဘာသာပြန်လိုက်ရင် အားနည်းသွားပါတယ်။ အောက်က စာသားကို မူရင်းအတိုင်းဖတ်ကြည့်ရင်ပိုကောင်းတာကို ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ စာသားတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါ နားလည်သွားလိမ့်မယ်။
There will always be poetry, in its search for language,adesire for the liberation of the imagination.
စိတ်ကူးစိတ်သန်းရဲ့ လွတ်မြောက်မှုကို ဆန္ဒပြင်းပြမှုနဲ့၊ ဘာသာ စကားကို ရှာဖွေလိုမှု တွေအတွက် ကဗျာ ဆိုတာ အမြဲ ရှိလိမ့်မယ် ...။
တော်တော်လေးကို ပြောင်မြောက်တဲ့အဆိုလို့ ခံစားရတယ်။နောက်ထပ် သဘောကျစရာကောင်းတဲ့အဆိုတစ်ခုက Breton ပြောတဲ့ ..."to imagine is to see".
သိဖို့ စိတ်ကူးကြည့်တာတဲ့ ...။ အဲဒါကို သိပ်သဘောကျတယ် ....။ ပေါတောတော စိတ်ကူးယဉ်တာမဟုတ်ဘူး ...။ အဲဒါကို သိချင်လို့ စိတ်ကူးတာ။ ... ဘယ်လိုဒဿနမျိုးဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးကြည့်ရတာချည်းပဲ။ လက်တွေ့မလုပ်ခင် စိတ်ကူးပြီးလုပ်ရတာတွေချည်းပါပဲ။ ကဗျာမှာလည်း စိတ်ကူးရတယ် ...။ တွေးရတယ် ...။ ကဗျာဟာအခွံတစ်ခုဆိုတာထက်ပိုပါတယ်။ စကားလုံးတွေ တပ်ဆင်ပြသမှုဆိုတာထက်လည်းပိုပါတယ် ....။
ကဗျာတွေဟာ Tales တွေနဲ့ တူညီတာတစ်ခုရှိတယ် ...။ Tales ကို ဘာသာပြန်ရင် Stories of Stories လို့ပြန်ရမယ်ထင်တယ်။ ပုံပြင်တွေအကြောင်းပုံပြင်။ ဆိုလိုတာက Tales တွေထဲက နေရာဒေသဟာ တစ်ခြားဒိုင်မင်းရှင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ တိရစ္ဆာန်တွေ စကားပြောလို့ရတယ် ....။ ဟယ်ရီပေါ်တား မြွေစကားတတ်တာကလည်း Tales ဆန်တဲ့ အရေးအသားမျိုးပါပဲ။ ဆိုလိုတာက Tales က သီးခြား ဒိုင်မင်းရှင်းရှိတယ် ...။ လက်ရှိနေတဲ့လောက ကို လွန်မြောက်တဲ့သဘောပါတယ်။ ကဗျာဆရာက တိမ်ဖြစ်တယ်၊ငှက်ဖြစ်တယ်။ ငါးဖြစ်တယ်။ ပြည့်တန်ဆာရဲ့ အပြုံးဖြစ်တယ်။ ... Tales ထဲမှာ ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် ...။ Freedom of Poetry ဆိုတာ ကဗျာရဲ့ ဒိုင်မင်းရှင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုမှုလို့ နားလည်မိပါတယ်။ ကဗျာက ဗဟု ဒိုင်မင်းရှင်းမှာ လှပစွာပွင့်နေတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ပဲပေါ့ ....။
အခုဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ စာအုပ် နာမည်က Forces of Imagination ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ။ စာရေးသူက Barbara Guest ဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ် နှစ်အုပ်ကို ငှားဖို့ ရွေးရင်း ဒီတစ်အုပ်ကို ရွေးဖြစ်သွားပါတယ်။ အရင်ငှားထားတဲ့စာအုပ်တွေပြန်မအပ်ရသေးတာနဲ့ တစ်အုပ်ပဲ ထပ်ငှားလို့ရတဲ့အချိန်မှာမှ စာအုပ်ကောင်းနှစ်အုပ်ကို တပြိုင်နက်တွေ့တာကတော့ နည်းနည်းတော့ ရွေးရခက်ပါတယ်။ Bugis က Central Library မှာ စာဖတ်ဖို့ခုံမရှိတာနဲ့ ကလေးတွေ စာဖတ်ခန်းမှာ အုပ်ထိန်းသူယောင်ဆောင်ပြီး ကလေးခုံလေးနဲ့စာဖတ်နေတုန်း ရုံးက သူဌေးနဲ့လာတွေ့ပါသေးတယ်။ ကလေးတွေလည်း စာတော်တော်ဖတ်နိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ Singapore မှာတော့ မိဘတွေက ကလေးတွေ စာဖတ်ဖို့ ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ကလေးတွေ ဘာဖတ်သင့်လဲဆိုတာ မိဘတစ်ယောက်က စိတ်ရှည်လက်ရှည်ထိုင်ရွေးပေးနေတာ၊ ထိုင်ဖတ်ပြနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ငယ်ကတည်းက တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ်မဖတ်တတ်သေးတဲ့စာတွေ ဖတ်ပြနေရင် သိပ်သဘောကျပါတယ်။ အခု ကလေးတွေလည်း စာဖတ်ရတာပျော်ရွင်ပုံရပါတယ်။ စာဖတ်လို့ ညောင်းလာတဲ့အခါ ဘေးက ကလေးတွေကို လေ့လာရတာနဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေအပါအ၀င် ကျွန်တော်တို့ သင်ထားတာတွေမေ့သွားမှာပါပဲ ...။ နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့မှာက ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို လေ့လာလို့ရသလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းပါပဲ။ ကျောင်းမှာ စာကျက်ရင် မှတ်စုထုတ်ရသလို၊ အလုပ်အတွက် စာဖတ်ရတဲ့အခါမှတ်စုထုတ်ရတာပါပဲ။ Concepts တွေကို မှတ်မိအောင်လုပ်ရတာလည်း အတူတူပါပဲ။ အခု ကိုယ်ဝါသနာပါတာတွေ ရှာဖတ်တော့လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ရေးမှတ်စရာရှိတာ ရေးမှတ်ရတာပါပဲ။ ဘာမှမထူးပါဘူး ...။ ပညာရေးက ဒီလိုပဲလေ့လာရတာပါပဲ။ လေ့လာရတာကို ပျော်တဲ့သူတိုင်းအတွက် ပညာရေးဟာ ၀ါသနာလုပ်ငန်းပါပဲ ...။ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ ကိုယ်လေ့လာနေရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ် ....။ စာတွေဖတ်ရလို့လည်း တစ်ခါမှ မပျင်းသွားပါဘူး။ ဒီတစ်အုပ်မကြိုက်ရင်နောက်တစ်အုပ်ပြောင်းဖတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ စာအုပ်ပုံကြီးရှေ့ချပြီး တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ် ဖတ်ချင်တာလေးတွေ ရွေးဖတ်နေရတာ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးဟာ ကဗျာရဲ့ ပကတိတန်ဖိုးကို နားလည်ဖို့ အများကြီးဖွင့်ဆိုထားတာပါ။ စာအုပ်ရဲ့ ရှေ့ပိုင်း စာမျက်နှာ ငါးဆယ်ကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာတွေကို ပေါင်းပြီးရေးထားတာပါ။ကဗျာဆိုတာ ရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားတာကို စိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်လည်း ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် ကဗျာရေးမယ်ဆိုရင် ကဗျာကို တကယ်ချစ်စေချင်ပါတယ်။ တကယ်လေ့လာပြီး တကယ်ရေးပါ။ LP ရေးရေး ... Modern ရေးရေး Post Modern ရေးရေး၊ လေးလုံးစပ်ရေးရေး ... ကဗျာစစ်စစ်ကိုရေးပါ။
ကဗျာရဲ့ အနှစ်သာရကို ခံစားနားလည်တတ်လာတဲ့အခါ ကဗျာပဲရေးရေး ကဗျာပဲဖတ်ဖတ် သိပ်အရသာရှိပါလိမ့်မယ်။ Comments အားဖြင့်မအောင်မြင်တာ အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာတန်ဖိုးအရ အောင်မြင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
Blogs မှာ ကဗျာကောင်းလေးတွေ ရေးပေးနေကြတဲ့ ကဗျာဆရာမ(စစ်စစ်)တွေ၊ကဗျာဆရာ(စစ်စစ်)တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလည်း စကားစပ်မိတုန်းပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
Art's For Art's Sake .... ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်..
Art's For blah-blah's Sake ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ဆိတ်ပါ ...။ ကူပြီးမဆိတ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကျွဲကူးရေပါပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အစအဆုံးဖတ်တဲ့သူတွေကို Toto နှစ်သန်းပေါက်တဲ့အခါ တစ်ယောက် ၅ သောင်းစီပေးဖို့တောင် စီစဉ်ထားပါသေးတယ်။ နှစ်ခေါက်ဖတ်သွားတဲ့သူကိုတော့ တစ်ခါတည်းနားမလည်ရကောင်းလို့ ဆူပူမာန်မဲဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး ဆိုတာလည်း အသိပေးပါတယ်။